Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Ny andiany Netflix an'i James Wan, 'Archive 81' Trailer dia toa mangatsiatsiaka tanteraka
Combo misy sary hita sy Zazakely Rosemary
by Trey Hilburn III Janoary 5, 2022
by Trey Hilburn III Janoary 5, 2022 27,129 hevitra
Archive 81 toa mivadika mahaliana amin'ny karazan-tsary hita. Izany rehetra izany amin'ny alàlan'ny a Zazakely Rosemary setup, feno miaraka amin'ny kulto creepily mihazakazaka amok ao amin'ny trano fonenana. Ity dia mpanatanteraka novokarin'i James Wan sy Michael Clear avy amin'ny Atomic Monster.
Fomba tsara hanombohana ny taom-baovao ny hazakazaka andiany valo. Izy io koa dia mahavita mitondra avy hatrany ny atmosfera izay mavesatra amin'ny tahotra. Tsy ratsy izany raha toa ka trailer ihany. Raha mahavita miteraka tahotra ity clip kely ity dia azoko sary an-tsaina hoe ho toy ny ahoana ny fizarana 8 rehetra.
Ny synopsis ho an'ny Archive 81 mandeha toy izao:
Ny Archive 81 dia manaraka ny archivist Dan Turner (Mamoudou Athie), izay miasa amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny fitambaran'ireo horonam-peo simba nanomboka tamin'ny 1994. Manangana indray ny asan'ny mpanao horonantsary fanadihadiana iray antsoina hoe Melody Pendras (Dina Shihabi), dia voasarika ho amin'ny fanadihadiana momba ny fivavahana mampidi-doza izy. ny tranobe Visser. Rehefa mandeha ny vanim-potoana amin'ireo fandaharam-potoana roa ireo, i Dan dia mahita ny tenany ho variana amin'ny famoahana ny zava-nitranga tamin'i Melody. Rehefa mamorona fifandraisana mistery ireo olona roa ireo, dia resy lahatra i Dan fa afaka mamonjy azy amin'ny fiafaran-javatra mahatsiravina nihaona taminy 25 taona lasa izay.
“Mirona amin'ny fampisehoana boaty mistery aho, ilay karazana mitondra antsika hidina any amin'ny lavaka bitro mankany amin'ny tontolo hafahafa sy maizina." Showrunner, hoy i Rebecca Sonnenshine. “Ny arsiva 81 dia tantaram-pihetseham-po miompana amin'ny toetran'ny zavakanto, ny finoana ary ny fikatsahana ny maha-izy azy — samy voafono ao anaty bodofotsy feno tahotra misy. Ny seho ihany koa dia nanome fahafahana an'ity mpilalao sarimihetsika ity hamoaka ireo karazana haino aman-jery hadino rehetra araka ny sary hita, izay miteraka tantara miavaka sy azo jerena izay sady tsara tarehy no mampatahotra. "
Mamoudou Athie (Dan Turner), Dina Shihabi (Melody Pendras), Martin Donovan (Virgil Davenport), Matt McGorry (Mark Higgins), Julia Chan (Annabelle Cho), Evan Jonigkeit (Samuel), Ariana Neal (Jess).
Archive 81 ao amin'ny Netflix nanomboka ny 14 Janoary.